OTDYKH Leisure Fair 2021 Hatao any Moskoa 7-9 septambra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » OTDYKH Leisure Fair 2021 Hatao any Moskoa 7-9 septambra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Taorian'ny fahombiazan'ny tsenan'ny dia tamin'ny taon-dasa na eo aza ny fanamby dia miverina amin'ny andiany faha-27 amin'ny expo ny OTDYKH. Ny hetsika dia hatao ny 7-9 septambra ary hatao ao amin'ny foara EXPOCENTRE.
Hisy orinasa 400 avy amin'ny firenena 16 ary faritra Rosiana 50 no andrasana handray anjara amin'ity hetsika fizahan-tany sy fizahan-tany ity.
Ny faritra mpiara-miasa ofisialin'ny fampirantiana 2021 dia Nizhny Novgorod.
Mpampirantiana iraisam-pirenena marobe no andrasana hiverina amin'ity foara fitaterana ity.
Amin'ity taona ity dia orinasa 400 eo ho eo no antenaina hanatrika avy amin'ny firenena 16 sy ny faritra Rosiana 50. Averina indray, ny OTDYKH Leisure Fair dia kasaina hampiseho ny antony maha-laharana voalohany ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Russia.
Tamin'ity taona ity no niverina ny mpandray anjara iraisam-pirenena marobe. Ireo firenena manatrika ny 2021 OTDYKH Leisure Fair ahitàna an'i Espana, Sipra, Bulgaria, Thailandy, Sina ary maro hafa. Firenena amerikana latina marobe ihany koa no haneho izay tsara indrindra omen'ny indostrian'ny fizahantany azy ireo.
Iray amin'ireo firenena ireo i Kiobà, izay handray anjara amin'ny fijoroana mirefy 100m², manamarika ny tetezamita miverina amin'ny endrika fampirantiana mialoha ny areti-mandringana. Ny expo dia faly koa mandray ireo vaovao amin'ny hetsika; ny faritra Ceará any Brezila, izay hanana fijoroana manokana. Any avaratra atsinanan'ny firenena no misy ny faritra ary iray amin'ireo toerana fizahan-tany any Brezila. Ny fanjakana dia mirehareha amin'ny morontsiraka fasika 600 kilometatra midadasika ary mifanakaiky amin'ny ala nasionalin'ny Araripe.
Ity expo ity dia mandray tsara ihany koa ny orinasam-pitetezana Meksika 'Seven Tours' izay manana traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Fizahantany fito dia handray anjara lavitra ary hampiseho ny fahasamihafan'ny fizahan-tany any Mexico, ao anatin'izany ny morontsiraka manala fofonaina, fomban-drazana manankarena, nahandro tena izy ary kolontsaina tsy manam-paharoa. Izy ireo koa dia hampiseho ny fitiavana mandray vahiny izay natolotr'i Mexico.
Niverina niverina ara-pahasalamana ny fizahantany any Russia, ary tamin'ity indray mitoraka ity ny e-Visa vaovao any Rosia dia nanamora kokoa ny fitsidihana ny firenena. Raha miresaka any amin'ny faritra Rosiana dia hisy olona vaovao hiditra amin'ny OTDYKH Leisure Fair. Ny voalohany dia ny faritr'i Khanty-Mansi, fonenan'ny fiangonana ortodoksa tsara an'ny Fitsanganana amin'ny maty. Ny faharoa dia ny faritr'i Krasnoyarsk izay fantatra amin'ny endrika voajanahary mahavariana. Ny renivohitry ny faritra dia heverina ho iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Siberia.